Income Tax for Trusts - isiZulu
SARS Home > Client Segments > Businesses and Employers > Trusts > Income Tax for Trusts - isiZulu
IMBUYISELO YENTELANGENISO YAMAQOMANGCEBO (ITR12T)
15 kuNhlaba 2017 – Ukuphuculwa kweMbuyiselo Yentelangeniso (ITR12T)
Njengengxenye yokuzibophezela kwethu ukugcina amazinga aphezulu emiphumela ekusebenzeni kanye nokulandelwa kwemigomo, u-SARS usethule ukuphicothwa kweMbuyiselo yeNtelangeniso YamaQomangcebo kusukela zingu 15 kuNhlaba 2017.
Lezi zinguquko ezilandelayo zenziwe kwi-ITR12T:
Kawusezukuvunyelwa ukufakela isicelo amakhredithi entela yasemazweni ngemisebenzi oyenze kuleli yabe isitheliswa ngaphandle kwaseNingizimu Afrika. Nokho, uzokwazi ukufaka isicelo sokubanjelwa kwingeniso lemisebenzi oyenze eNingizimu Afrika yatheliswa ngaphandle kweRiphabliki. I-ITR12T isibuyekeziwe ukuze ihambisane nalezi zikhala ezihoxixiwe zesigaba esingu 6quin.
Umthetho Wentelangeniso (Isigaba 11D) sihlinzekela ukubanjelwa kwenziwe maqondana noCwaningo Nokuthuthukisa okuhambisana nezinkampani kuphela futhi nosekususiwe kwi-ITR12T.
Impucuko ye-ITR12T ingukwelulwa kwalokho okwenziwe ngesikhathi soMzuliswano Wentela ka-2016.:
Isitatimende Sempahla Nezinhlawulo manje sesihlukanisa phakathi kwama-akhawunti anenzalo nangenanzalo.
Isigaba esibhekene nengenisomali lerenti nelokulima seliphuculiwe.nalo.
Izinguquko ezahlukene zenziwe okubandakanya nezinguquko zalokhu:
Ukudalulwa kwengenisomali le renti; kanyeRental Income declaration; and
Sicela uqaphele ukuthi awuzukwazi ukuguqula noma ukususa noma yimiphi imininingwane ye-IRP5 efakwe yingalo yesithathu futhi ebesifakwe ngaphambilini kwimbuyiselo.
Uma kukhona okuqaphelayo okungeyikho kule mininingwane ebisifakwe ngaphambilini, uyacetshiswa ukuba uthintane nomqashi noma umhlinzeki wosizo ukuze bakwazi ukulungisa lokhu wena ungeke wakwazi ukuguqula noma ukushintsha imininingwane ye-IRP5 efakwe ngoyingalo yesithathu.
Imininingwane efakwe ngaphambilini netholakale koyingalo yesithathu kunokwenzeka ukuba ibisike yaguqulwa kumbe yaphuhliswa ngakho ukuze ke mininingwane ivusePre-populated information received from a third party may have been changed or updated and in order for this information to pre-populate, you will have to click ‘Refresh’ to continue.
Isungqangi: Isibonelo sefomu i-ITR12T elisha sesikhona.
Isungqangi: Kusemqoka ukuba u-SARS abe nemininingwane yomkhokhintela eqondile nehambisana nesikhathi. Uma ugcwalisa imbuyiselo i-ITR12, umbuzo wokuqala ngaphansi kweMininingwane NgeQoma’ umbuzo wokuqala uthi “Ingabe imininingwane yeqomangcebo yasebhange, yezokuxhumana kanye neyababhekiqoma iqinisekisiwe njengeliqiniso?” Uma impendulo kulo mbuzo kungu-‘Cha’, awuzukwazi ukuletha imbuyiselo ye-ITR12T kuze kube le mininingwane yeqomangcebo isiqinisekisiwe njengeliqiniso.
Ungakwazi ukubona imininingwane yomkhokhinyea evele ikhona ku-eFiling ngokucindezela ku ‘Legal Entity Profile’. Uma unalo igunya lamandla okumela kwiqomangcebo, ungakwazi ukuya egatsheni lakwa-SARS uma udinga imininingwane yakamuva.
Isungqangi: Ngesikhathi ugcwalisa i- ITR12T sicela ude ucindezela u-‘Save’ njalo ukuze ulahlekelwa imininingwane osuyifakile uma kwenzeka ivala i-eFiling yakwa-SARS.
Ngeminye imininingwane, sicela ubheke eyakamuva i- Complete the ITR12T webpage, kanye ne-Step-by-Step Guide to complete your ITR12T via eFiling kanjalo ne-Comprehensive Guide to the ITR12 for Trusts .
Sicela ukhumbule futhi ukuthi kasisazithathi izimbuyiselo zamaqomangcebo (ITR12T) ngeposi.
12 kuZibandlela 2016 – Ukuphuculwa okunye kweMbuyiselo Yentelangeniso Yezinkampani (ITR14)
U-SARS usethulo ukuphuculwa kweMbuyiselo Yengenisomali Yezinkampani (ITR14) ngo 9 kuZibandlela 2016. Funda kabanzi.
Imbuyiselo Yentelangeniso Yamaqomangcebo ibizwa Ngembuyiselo Yentelangeniso Yamaqomangcebo (ITR12T).
Iqale nini ukusebenza?
Ifomu eliphuculiwe le-(ITR12T) liyatholakala kusekela zili-12 kuMfumfu 2015.
Ngingayithola kanjani i-TR12T?
Ifomu (ITR12T) liyatholakala ku-eFiling kumbe ungaligcwalisa egatsheni lakwa-SARS egameni lommeleli/Isazi Sentela seqomangcebo (bheka esikhaleni esithi “How to submit the ITR12T”).
Isibonelo se- ITR12T siyatholakala uma ufuna ukusitheza (download). Uma uya egatsheni lakwa-SARS ukuyogcwalisa, kuzodingeka uligcwalise andukuba uye khona egatsheni. Ngeminye imininingwane ekugcwalisweni kwe-ITR12T, cindezela lapha.
Isungqangi: Ukucela ukuposelwa i-ITR12T akusekho futhi aposelwe kithi sizowalahla..
Uyiletha kanjani i- ITR12T?
Imbuyiselo yeqomangcebo i-ITR12T ingalethwa ngeminye yale migudu elandelayo:
Gcwalisa nge- eFiling
Iya egatsheni lakwa-SARS ukuyogcwalisa i-ITR12Tohlelweni lwamakhompyutha ethu.
Noma yiliphi iqomangcebo elisabalalise/elitshale isamba esithelayo kubahlomuli abangaphezu kwabali-10 noma kunini maphakathi nonyaka wokubuyekeza kufanele babhalise futhi balethe i-ITR12T nge-eFiling.
Noma yiliphi iqomangcebo elisabalalise/elitshale isamba esithelayo kubahlomuli abangaphezu kwabali-10 noma kunini maphakathi nonyaka wokubuyekeza bangabhalise futhi balethe i-ITR12T nge-eFiling. Nokho-ke uma iqomangcebo lesimo esingenhla lingabhalisiwe, ummeleli/Isazi Sentela kufanele baye egatsheni lakwa-SARS ukuze beyogcwalisa imbuyiselo.
Funda izinhlobo zamaqomangcebo
Funda kabanzi ulibhalisa kanjani iqomangcebo
Funda kabanzi uyigcwalisa kanjani i-ITR12T
Shayela Isikhungo Sezingcingo sakwa-SARS ku-0800 00 SARS (7277)
Vakashela igatsha lakwa-SARS elibuduze nawe.
Last Updated: 13/12/2017 1:14 PM ​